Tuesday December 12, 2017 - 19:49:05 in Wararka by Super Admin
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya duqeyn ay diyaarad dagaal oo dowladda Mareykanka leedahay ay xalay ka geysteen deegaan katirsan gobolka Sh/hoose ee dhaca Koonfurta Somaaliya.
Xalay Saqdii dhexe ayay diyaarad Drone ah waxay gantaal ku dhufatay gaari dad shacab ah leeyihiin oo xilligaas khudaar kasoo daabulay dhul beereedka ku dhow deegaanka Mubaarak.
Gaariga la duqeeyay oo ahaa Nuuca Soomaalidu utaqaan Hoomeey ayaa lagu raray Khudaar ubadan Moos, Nasiib wanaag xilligii duqeyntu ku dhacaysay gaariga waxaa ka maqnaa darawalkii iyo Kirishbooyga oo jiif u aaday gudaha magaalada sidaas daraadeed majirin wax khasaara nafeed ah oo ka dhashay duqeyntan.
Milkiilaha gaariga la duqeeyay ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda Mareykanka ay si gardarra ah u burburisay hantidooda isagoo shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka dhiidhiyaan xadgudubyada uga imaanaya dowladaha shisheeye.
Boqolaal qof shacab ah ayaa saaka gaaray goobta lagu burburiyay gaariga khudaarta siday, waa markii 2-aad oo bishaan gudaheeda ay diyaaradaha Mareykanka duqeymo ka geystaan Sh/Hoose, maalmo ka hor ayay dad shacab ah ku dileen duleedka deegaanka Farsooleey.